သဘာဝ milky လင်းကျောက် - Oliveira dos Brejinhos, ဘရာဇီး - ဗီဒီယို
အနာရောဂါငြိမ်းစရာ crystals အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သလား?
ကျောက်မျက်ရတနာ optical ဖြစ်ရပ်ဘာတွေလဲ?
တစ်ကျောက်မျက် tester ကဘာလဲ?
Tags: milky, Quartz
Post ကို Share:
milky လင်းကျောက် macrocrystalline လင်းကျောက်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရှားပါးအဖြူအရောင်အတွက်လာပါတယ်။ အရောင်-အဖြူအဖြူတစ်ခုသို့မဟုတ်အလင်း၏တစ်ဦးက pastel တင့။ ဒါဟာမ ရော့ခ်ကြည်လင်လင်းကျောက် လည်းမအမြစ်ကားမဟူရာ။ အဆိုပါလင်းကျောက်မိသားစုမှဤသည်မှာအဆန်းများအပြင်ဒါဟာထူးခြားတဲ့အရောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တူညီသည် လာဗင်ဒါလင်းကျောက်ကတစ်ခုတည်းမိုင်းမှသာရရှိနိုင်သည်။ အိမ်ရှင်ကျောက်ထဲကတိုက်ရိုက်တူးဖော်။ milky လင်းကျောက်ဟာ Boquira မိုင်းကနေလာပါတယ်။ Oliveira dos Brejinhos ၏မြို့နယ်မှ။ Bahia ၏မြောက်ပိုင်းဘရာဇီးပြည်နယ်၌တည်၏။ အဆိုပါ Borquria သတ္တုတွင်း 1956 ဖွင့်လှစ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာမရှိတော့လက်ရှိထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Quartz ဆီလီကွန်နှင့်အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်၏ရေးစပ်တဲ့ဓာတ်သတ္တုဖြစ်ပါတယ်။ SiO4 ဆီလီကွန်အောက်စီဂျင် tetrahedra တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်မူဘောင်၌တည်၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုအောက်စီဂျင်အက်တမ်နှစ်ခု tetrahedra အကြားရှိပါတယ်။ ဒါဟာ SiO2 တစ်ခုခြုံငုံဓါတုဗေဒဖော်မြူလာ giges ။ ဒါဟာ feldspar နောက်ကွယ်မှ, ကမ္ဘာမြေရဲ့တိုက်ကြီးကမ္ဘာ့အပေါ်ယံမြေလွှာတွင်ဒုတိယအပေါများဆုံးသတ္တုဖြစ်ပါတယ်။
လင်းကျောက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးပေါင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာ Semi-အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးကတည်းကလင်းကျောက်၏အမျိုးပေါင်းအများဆုံးအသုံးပြုသောသတ္တုဓာတ်ခဲ့ကြပြီ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်ဥရောပအာရှအတွက်လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် hardstone အမွေးအတွက်အသုံးပြုသည်။
အစဉ်အလာကျောက်ကိုကြည်လင်သို့မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလင်းကျောက်ကိုခေါ်စင်ကြယ်လင်းကျောက်။ ဒါဟာအရောင်ကိုလည်းပွင့်လင်းသို့မဟုတ်စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏ hardstone အမွေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Lothair Crystal အဖြစ်။ ဘုံအရောင်အမျိုးပေါင်းပါဝင်သည် citrineလည်း လင်းကျောက်ထ, နီလာခရမ်းရောင်, smoky လင်းကျောက်, milky လင်းကျောက်နှင့်အခြားသူများ။
လင်းကျောက်အမျိုးအစားများအကြားအရေးကြီးသောဂုဏ်ထူးရှိပါတယ်။ အဆိုပါပုံဆောင်ခဲများနှင့်လည်း microcrystalline (cryptocrystalline) အမျိုးပေါင်း။ အဆိုပါ cryptocrystalline မျိုးပေါင်းစသို့မဟုတ်အများအားဖြင့်ဒီလိုပါပဲဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။ ယင်းပွင့်လင်းမျိုးပေါင်းပုံဆောင်ခဲဖြစ်လေ့နေစဉ်။ မွစျကားမဟူရာ silica တစ် microcrystalline ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးလင်းကျောက်၏ဒဏ်ငွေ intergrowths ကနေလာပါတယ်။ ၎င်း၏ monoclinic polymorphic moganite ။ လင်းကျောက်၏အခြားဒီလိုပါပဲကျောက်မျက်အမျိုးပေါင်းသို့မဟုတ်ကိုလည်းရောထွေးကျောက်ဆောင်။ မကြာခဏအရောင်ရဲတပ်သားသို့မဟုတ်ပုံစံများခြားနားအပါအဝင်လင်းကျောက်, အပါအဝငျ။ agate ကဲ့သို့ပင်လည်း carnelian သို့မဟုတ် sard, ရှဟံ, heliotrope နှင့်နဂါး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်သဘာဝ milky လင်းကျောက်ကိုဝယ်
Tags: ဂိလဒ်အမျိုးသား, Quartz
Tags: ခန်ဓာကိုယ်, Quartz
Tags: Quartz, သကြား
Tags: hydrothermal, Quartz, လက်လုပ်ဖြစ်သော
E-mail ကို *
ပင်မစာမျက်နှာ | ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
GEMIC Co. , Ltd / GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်း Co. , Ltd ©မူပိုင် 2014-2020, Gem.Agency